Ukuhlobisa Abathengisi be-Wire Mesh kanye neFektri - Abakhiqizi BaseWeshini Lokuhlobisa Wire Mesh eChina
Isixazululo se-Chain Isixhumanisi
Ijika le-Fly chain link linikeza imiphumela emihle yokuhlobisa nezisombululo ezithile zokuvikela. Isikrini se-Chain fly singavikela izinambuzane, ngasikhathi sinye, sinomphumela omuhle wokungenisa umoya ozokunikeza umoya omusha nendawo ehlanzekile. Ngaphezu kwalokho, iyatholakala ngemibala ehlukahlukene yokuhlangana nesitayela sakho sokwakha.
Ngenxa yalezi zinzuzo, ikhethini lokuxhumanisa ikhethini lifanela izindawo zokuhlala, amahhotela, izindawo zokudlela, izitolo, izindawo zokudlela, izitebhisi, izikhwama zezandla, ukuyothenga, ezitolo ezinkulu, izindawo zokungcebeleka, izindawo zokungcebeleka, amagumbi okubukisa, ikhishi, ihhovisi, izigcawu, izitebhisi zasesiteji, ezinye izikhungo zokuthenga nezinye izindawo. .
I-mesh ye-1.Ring yenziwa ngensimbi engenasici 304, 316, 316 L, ithusi, insimbi, njll. Imisebe yendandatho ingenziwa kunoma iyiphi imidwebo ngokwesidingo samakhasimende, njengesikwele, isiyingi, i-trapezoid, unxantathu, njll. Ukucaciswa okujwayelekile kwesikhala se-ring mesh Ayikho i-Wire Diabetes (mm) Isisindo se-Wertgh (kg / sq) 1 0.8 7 okungenasici 3 2 1 8 okungenasici 4.2 3 1 10 okungenasici 3.3 4 1.2 10 okungenasici 4.8 5 1.2 10 4.6 ...
Ukuhlobisa i-wire mesh kufaka i-iron coil drapery, i-ring mesh, i-chain chain isixhumanisi. Kusukela ekukhetheni kwezinto ezingavuthiwe, ukusoka, ukuvala onqenqemeni, ukuphathwa komhlaba kuya kwezinye izinqubo, kwenza i-wire mesh yokuhlobisa inemibala egqamile ehlukahlukene nokubukeka okuhle.
Isixhumanisi seChain Mesh
I-1.Metal coil drapery nayo ibizwa ngegama likhethini lensimbi, i-Metal coil drapery, indwangu yensimbi yokuqamba noma ikhethini lokuhlobisa le-wire mesh emakethe yethu yangakini. Iyindwangu yensimbi yesimanjemanje yokuhlobisa futhi eguquguqukayo futhi eguquguqukayo nensimbi yocingo. Ngenxa yomklamo wayo ohlukile nokuqina, Metal coil drapery akuyona ikhethini elivamile kepha umhlobiso osezingeni eliphakeme. Kutholakala ngemibala ehlukahlukene, i-Metal coil drapery ingaletha umcabango ongapheli kanye nesikhalazo esihle sobuhle ngaphansi kokukhonjiswa kwe-t ...